ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှသည် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့
“ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှသည် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့ ”
-သဘောထားခြင်းတူညီကြတဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းနီးကြတဲ့ လူငယ်တွေစုပေါင်းအင်အားနဲ့ ကိုယ့်အင်ကိုယ့်အားလေးနဲ့နိုင်သလောက် တနိုင်တပိုင် ကိုယ်ကျတဲ့နေရာလေးကနေ လက်တွဲပြီးလုပ်တာဒီနှစ်နဲ့ဆို ၃ကြိမ်ရှိလာပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာကခွင့်မပြုလည်း ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ဒီမိုကရေစီရေး၊လူ့အခွင့်ရေး တို့အတွက် အနစ်နာခံခဲ့သူတွေ ၊ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုပြီးလှုပ်ရှားနေကြသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ စာပေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေ လည်းဖိတ်သွားပါ့မယ်။ အထူး စိတ်မကောင်း
ဖြစ်မိတာ ခုချိန်ထိ ထောင်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ကိုအကြောင်း အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ဖမ်းထားတာ ကျန်နေသေးလို့ လူစုံတက်စုံနဲ့ဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲလေးကိုတပျော်တပါးမနွှဲနိုင်ကြသေးလို့ပါ။ ဒီနှစ်လဲ အဖမ်းဆီခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ လွှတ်ပေးရေးနဲ့ ၊ အခြားသောငြိမ်းချမ်းရေး ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းတောင်းဆိုသွားပါ့မယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ပါလီမာန်ကို တရားဝင်စာတွေတင်သွားမှာပါ။
- လောလောဆယ်တော့ ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိတ်စာရိုက်တုန်းရှိပါသေး တယ်။ သက်ဆိုင်ရာကဖက်ကတော့ လူ ၂၀၀ ပဲ ခွင့်ပြူတယ်လို့ပြောတယ်။ အခုထိတော့ ပြေလည်မှုမရသေးဘူး. နောက်ပြီး သတင်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်း ကြွရောက် မိန့်ခွန်းပြောမယ့် လူကြီးတွေ ရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွေလည်း အသေးစိတ်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းတောင်းခံနေတယ်။
- ကျနော်တို့ဖက်ကလည်း အဲလောက်ထိ ခရေစေ့တွင်းကျကတော့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်တာကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း အကြော င်းပြန်ထားပါတယ်။ဘဘဦးဝင်းတင်ကအခမ်းအနားကိုတက်မယ်ဆိုပေသည့် ဒီလိုစစ်လားဆေးလားတောင်းလားရမ်းလားတွေလုပ်နေရင် စကားမပြောဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဖက်တော့ အလုံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးကို ကျွန်တော်က အခုလုပ်မယ့်ပွဲဟာဆိုရင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ. ဖြစ်လို့ မြန်မာပြည်သူတွေတင်မကပဲ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသား အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ် စိတ်ဝင်စားသူတွေတက်ရောက်မယ် ဆိုရင်တော့ လူဦးရေကအတိမ်းအစောင်းဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း စာပို့ထားတယ် ။ ခုထိသက်ဆိုင်ရာဖက်ကအကြောင်းပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူး။ကျနော်တို့ လူငယ်တွေကတော့ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။
- ဒီမိုကရေစီကိုဦးတည်သွားနေတယ် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းေ ပ်ါလျှောက်ေ နတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတခု အစိုးရတရပ်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလို ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေထောင်ထဲမှာရှိနေတာ။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရရဲ့
ဂုဏ်သိက္ခာတရားနဲ့ မညီညွတ်ပါဘူး။ ဒါဟာပြည့်ဝတဲ့ဒီမိုကရေစီလို့လည်း မဆိုအပ်ပါဘူး ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ ဖမ်းဆီခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများကိစ္စ၊ဧရာဝတီမြစ်စုံကိစ္စ၊တိုင်းရင်းလက်နက်ကိုင်များအရေးကိစ္စ နဲ့ပတ်သတ်လို့စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ အစိုးရမှန်လျှင် ပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်ပြီး အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ (ကိုလူမော်) မှမေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘဘဦးတင်ဦးကိုယ်တိုင်ကလည်း တက်ကြွစွာနဲ့ ဖမ်းဆီးခံ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလွှတ်ပေးရေးတောင်း ဆိုခဲ့ ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဂျိုးငှက်များလဲလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်လဲ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်မယ့်အပြုသဘောလဲဆောင်မယ့် တောင်းဆိုချက်တွေ ပါပါ့မယ်။ “ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှ သည် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး သို့ဦးတည်တဲ့ ” လှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်တဲ့ ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့လေးကို အားလုံးသောညီအကိုမောင်နှမတွေတက်ရောက်ဖို့… ငြိမ်းချမ်းရေး၊ဒီမိုကရေစီရေး၊
လူ့အခွင့်ရေးလိုလားသူများနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူများ အားလုံးကိုဒီနေရာကနေပြီး အကြမ်းမဖက်အမျိုးသားလှုပ်ရှား သူများကိုယ်စား ကျွန်တော် (ကိုလူမော်လတ်) မှဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
phone 09421063210 (ကိုလူမော်လတ်)
စာရေးသူ Unknown အချိန် 1:13 AM